त्रिनगर–गौरीफन्टा नाकामै लुटिन्छन् नेपाली | Dinesh Khabar
२०७८ साउन १५, शुक्रवार ०६:२९
त्रिनगर–गौरीफन्टा नाकामै लुटिन्छन् नेपाली
२०७८ साउन ७ ०७:१०
धनगढीः मंगलबार बझाङका प्रेम रावल परिवारसहित रोजगारीका लागि भारत गइरहेका थिए। सिमसिमे पानीमा दुधे बालक र श्रमितीसहित भारत पस्नेको लाइनमा थिए उनी। हातमा थियो एउटा भिजिड कार्ड। जुन यातायात व्यवसायीहरुले भाडा असुलेर टिकटको सट्टा दिएका थिए। यातातात व्यवसायीले भारतको एउटै ठाउँ गइरहेकाहरुको बाटोमै एक ग्रुप बनाएर होटलमा टिकट काट्न लगाएको उनी बताउँछन्।
उनले भने, ‘हामी भारतको बेङग्लोर जाने १२ जना छौँ। धनगढी चौराहाको एक होटलबाट टिकट काटिएको थियो। तर अहिलेसम्म टिकट दिएका छैनन्। पहिले एक हजार भारुमा पुगिन्थ्यो। आज आउँदा त सिधै ४ हजार भन्नुभयो। यति महंगो किन भन्दा लकडाउनले गर्दा बढेको हो भने।’
उनको हातमा जय लक्ष्मी सेती लुम्बिनी टुर्स एण्ड ट्रावल्स प्रालीको कार्ड थियो। त्रिनगर–गौरीफन्टा सीमा नाकाबाट रोजगारीका लागि भारत जानेहरुमाथि चरम लुट हुँदै आएको हो। धनगढीका होटल सञ्चालक र सीमा नाकामै अबैधानिक रुपमा टिकट काटेर रोजगारीका लागि भारत पठाउनेहरुले लुट्न थालेका हुन्। एक हजार भारु पर्ने ठाउँको एकै जनाबाट ४ हजारसम्म भाडा असुली भइरहेको हिमाञ्चल प्रदेश गइरहेका एक दम्पत्तिले बताए।
नेपालबाटै टिकट काटेर भारत पठाउनु अबैधानिक भएको स्वयम ट्रावल्स प्रालिहरुले नै स्वीकार गरेका छन्। नेपालबाट भारत जानेहरुको टिकट काट्न अहिले अनुमती नभएको जय लक्ष्मी सेती लुम्विनी टुर्स एण्ड ट्रावल्स प्रालीका कर्मचारी खगेन्द्र जोशीले बताए। उनले भने, ‘अनुमति नहुँदा पनि हामीले टिकट दिइरहेका छैनौ। भाडा भने यतै काटिरहेका छौ। भारतको पलियाबाट उनीहरु आफ्नो गन्तव्य जान्छन्।’
धनगढी बसपार्कमा रहेका होटलहरुमा भारतका विभिन्न राज्य तथा शहरका लागि बसको टिकट काटिने गरिएको छ। तर उनीहरुसँग बस भने छैन्। भारतीय बसमा नेपाली पठाउदै आएका उनीहरुले बेलाबेला नेपालीलाई बीच बाटोमै अलपत्र छोड्ने गरेको आरोप समेत लागेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका सूचना अधिकारी शिवराज जोशीले यसबारे कुनै जानकारी नभएको बताए।
२०७८ साउन १५ ०६:०३
डोटी प्रहरीले बरामद गरेको एक किलो सुन र १७ लाख बढी नगदमा ‘हिनामिना’ !
जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीको टोलीद्वारा बरामद गरिएको सुन तथा रु. १७ लाख बढी रकममा अनियमितता गरेको आरोप लागेको छ। … विस्तृतमा
२०७८ साउन १५ ०५:५७
धनगढीः कैलालीमा नदीमा नुहाउने क्रममा २ बालबालिकाको मृत्यु भएको छ। जिल्लाको भजनी नगरपालिका–९ डोङपुरस्थित कान्द्रा नदीमा नुहाउने क्रममा दुई बालबालिकाको मृत्यु भएको हो भने एक जना बेपत … विस्तृतमा
२०७८ साउन १५ ०५:४०
बैतडीमा शिक्षकहरुले रिले अनसन थालेका छन्। शुक्रबार सरकारसँग राखेका शैक्षिक तथा पेशागत हकहितका मागहरु पूर्ण कार्यान्वयनको माग राख्दै शिक्षकहरुले अनसन थालेका हुन्। … विस्तृतमा